Ogaden News Agency (ONA) – 20ka June waa Maalinta Qaxootiga Caalamka (World Refugee Day) – Daawo Qaxootiga Ogadenya ee Dhadhaab
20ka June waa Maalinta Qaxootiga Caalamka (World Refugee Day) – Daawo Qaxootiga Ogadenya ee Dhadhaab
Posted by ONA Admin	/ June 20, 2014
Waxaa dacalada aduunka aad looga hadal hayaa xuska maalintan, sababtoo ah wuxuu caalamka qiray doorka ay ku leeyihiin qaxootiga horumarka wadama badan oo caalamka ka jira. Dalalka maanta ugu dhaqaalaha badan caalamka maanta sida Mareykanka, Canada, Australia, waxaa asaaskeeda leh qaxootigii ka soo cararayay dagaaladii sokeeye ee ka socday dalalka Yurub ilaa iyo qarnigii 18aad.
Dalalkaa ayaa ka mid ah kuwa sida fiican looga qadariyo qaxootiga oo maalintan sida fiican looga xuso. Waxaa ku darsamay dalalka kale ee caalamka ee fahmay in qofka aadanaha ah uu yahay asaaska horumarka iyo hodanimada dalalkaa.
Jaaliyadaha S.Ogadenya ee ku nool dalal farabadan oo Yurub, Ameerikada Waqooyi, Australia, dalalka Khaliijka iyo dalka Koonfur Afrika, ee ka soo qaxay dagaaladii sokeeye ee Somaliya iyo dhibaatada hadda uu ku hayo gumaysiga Itobiya shacabka Ogadenya, ayaa door waxtar leh ka qaata dhaq-dhaqaaqa nololeed ee dalalkaa. Qaar badan ayaana waxbarasho heer sare ah ku qaatay oo ka mid ah dabaqadda dhexe ee dalalkaa. Qaar kale ayaa qayb fiican ka qaata siyaasadda dalalka ay ku noolyhiin oo ka mid ah xisbiyada.
Waxaa mudan oo aan la iloobi karin doorka taageerada ahee ay jaaliyadaha ka qaataan halganka ay shacabka Ogadenya ugu jiraan aaya-ka-tashigooda, iyagoo dawladaha ay dhalashadooda qaateen ee canshuurtooda ay bixiyaan u sharxa dhibaatada uu ku hayo gumaysiga dhiigyacabka ah walaalahood. Waxaa kaloo lagu xasuustaa jaaliyadaha Ogadenya banaanbaxyada joogtada ahee ay ku hordhigaan marka ay xukuumadda dhiigyacabka ah ee KT Meles hogaaminayo ay dibadaha u soo baxaan.
Waxaan xuska munaasabadan caalamiga ah ee Maalinta Qaxootiga Aduunka kala qayb qaadanaynaa dunida anagoo ballan qaadayna in aanan iloobin waligeen in aan gargaar u fidino qof qaxooti ah oo dhibaataysan meel uu joogaba.